လူမှုပညာရေးအတွက်ဒီဂရီလေ့လာရန်အကြောင်းရင်း5| ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Maite Nicuesa | 18/05/2021 08:00 | လေ့ကျင့်ရေး
El လူမှုရေးပညာပေး သူသည်မြို့ကြီးများနှင့်မြို့ကြီးများတွင်အလွန်အရေးကြီးသောအလုပ်ကိုလုပ်သောကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ လူအားလုံးသည်အရေးကြီးပြီးလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ပေါင်းစည်းမှုသည်ဘုံကောင်းကျိုးကိုခိုင်မာစေသည်။ သို့သော်အချို့သောအုပ်စုများသည်လူမှုရေးအဆင့်တွင်မမြင်ရသောခံစားမှုမျိုးကိုခံစားရန်ပိုမိုအားနည်းသောအုပ်စုများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများ၏လက်တွေ့မကျသည့်ပုံသဏ္paintာန်ကိုဖော်ညွှန်းသည့်စိတ်စွန်းကွက်မှုများကိုပြသထားသောအသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများဖြစ်သည်။
ပညာရေးသည်လူသားဝါဒမှတစ်ဆင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဆောင်ရွက်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနယ်ပယ်အတွင်း၌ဆက်စပ်နိုင်သည် ကလေးဘဝ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, လူငယ်သို့မဟုတ်အသက်ကြီး။ အခြားအားနည်းသောအုပ်စုများကိုလည်းသင်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်လူမှုရေးပညာရေးအတွက်ဒီဂရီလေ့လာရ? လေ့ကျင့်ရေးနှင့်လေ့လာရေးတွင်သင့်ကိုအကြံဥာဏ်အချို့ပေးသည်။
1 1. ပြောင်းလဲမှု၏အေးဂျင့်ဖြစ်လိမ့်မည်
22။ တန်ဖိုးများ
3 ၃။ လူတွေရဲ့ဘ ၀ ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ
44စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူမှု
လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအသွင်ပြောင်းမှုများကိုမြှင့်တင်ရန်ဤရည်မှန်းချက်ကိုမီသောစီမံကိန်းများတွင်ခေါင်းဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ဤဝိသေသလက္ခဏာများပြောင်းလဲမှုသည်မတော်တဆဖြစ်မှု၏ရလဒ်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းမှမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ လိုချင်သောလမ်းကြောင်းသို့ရွေ့လျားနိုင်ရန်အတွက်လက်ရှိအခြေအနေကိုဖော်ထုတ်ရန်အရေးကြီးသည်။ လူမှုရေးပညာပေးသည်ဤပြောင်းလဲမှုမဟာဗျူဟာတွင်ပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သောသင်တန်းများရှိသည်.
2 ။ တန်ဖိုးများ
လူမှုရေးကောင်းအဖြစ်ပျော်ရွှင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတိုင်များရှိသည်။ တန်ဖိုးများသည်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အခြားသူများအားတန်ဖိုးထားမှုများ၏အရေးပါမှုကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့်ပညာရှင်များလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ လူသား၏အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်သောတန်ဖိုးများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်.
၃။ လူတွေရဲ့ဘ ၀ ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ
လူမှုရေးပညာပေးသူသည်အထူးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်မှုဖြင့်အရင်းအမြစ်အသစ်များရယူသုံးစွဲသူတို့၏ဘ ၀ တွင်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုမည်သို့ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ပြောင်းလဲမှုသည်ချက်ချင်းမဟုတ်သော်လည်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအကူအညီသည်မှီခိုမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်မဟုတ်ဘဲကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်လူတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များဖြစ်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြင်ဆင်မှုရှိခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများကိုကိရိယာအသစ်များဖြင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။
လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်လုံးဝထူးခြားပြီးကွဲပြားခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့်ဤမတူကွဲပြားမှုသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုရိပ်မိသူများ၏လုပ်ငန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုကြွယ်ဝစေသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အခြေအနေများအထူးသဖြင့်လူမှုရေးပညာပေးခရီးသည်တူညီမည်မဟုတ်ပါ။
လူမှုရေးပညာပေးသူသည်အခြားသူများကိုကူညီသည်၊ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းတွင်ရှုပ်ထွေးသောအဖြစ်မှန်ကိုပြသသောပုံပြင်များနှင့်အဆက်အသွယ်မှအဆက်မပြတ်သင်ယူသည်။ လူမှုရေးပညာပေးသူသည်သူနှင့်အတူလိုက်ပြီးလမ်းပြသူများ၏တိုးတက်မှုစွမ်းရည်မှသင်ခန်းစာယူသည်။
လူအားလုံးသည်အဆင်ပြေသောအခြေအနေမဟုတ်သော်လည်းအားလုံးပျော်ရွှင်ရထိုက်သည်။ ပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖို့လိုတယ်။ လူမှုပညာရေးသည်အရေးကြီးသောအတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိသည့်မေးခွန်းများ၏အဖြေကိုပေးသည်။
လူမှုရေးပညာပေးသည်အားနည်းချက်ရှိသောအခြေအနေမျိုးတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သောပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူသူသည်ထိုရှုထောင့်ကိုမျက်မြင်မရသောလေယာဉ်တွင်မထားရှိစေရန်ပြုလုပ်သည်။ သူသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။ သို့သော်လူမှုရေးပညာပေးသည်တက်ကြွစွာ၊ ဒီလိုမျိုး, စုပေါင်းသုခချမ်းသာကိုအားပေးရန်ရည်ရွယ်သောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဤနည်းဖြင့်တိကျသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ဤအခြေအနေမှခံစားနေရသောပိုမိုမြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသည့်အချို့သောအုပ်စုများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားရှောင်ရှားနိုင်သည်။
လူမှုရေးပညာပေး၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အကျပ်အတည်းကာလကိုဖြတ်သန်းနေသောယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤမြင့်မားသောအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုလုပ်ငန်းသည်လူသားအရင်းအမြစ်မြင့်မားမှုရှိသည်မှာသေချာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » NOTICIAS » လေ့ကျင့်ရေး » လူမှုပညာရေးအတွက်ဒီဂရီလေ့လာရန်အကြောင်းပြချက် 5